Tim Cook zutere Charlie Rose | Esi m mac
Tim Cook Na-ekwu,'stụ Taxtụ Isi Apple abụghị ihe karịrị "ndọrọ ndọrọ ọchịchị na shit"
Fraịde a anyị bipụtara ntinye n'ime nke anyị gwara gị otu CBS ga-esi malite mmemme ebe onye na-eweta ya bụ Charlie Rose ga-agwa Jonathan Ive okwu n'ime ụlọ nyocha Apple yana Angela Ahrendts na Applelọ Ahịa Apple. Ugbu a magazin ahụ bụ "Nkeji 60" ejirila nkeji nkeji nke mkparịta ụka ha na-abịanụ na Apple CEO Tim Cook.
N'ime obere nlele a, Charlie Rose nke a kpọtụrụ aha na mbụ jụrụ Tim Cook maka echiche ya n'okwu ahụ ụlọ ọrụ ya na-eji "usoro ọkaibe" eme ihe Gbanyụọ ụtụ na ya 74 ijeri dollar na o nwere ná mba ọzọ.
Nke Tim Cook zara:
Nkwupụta ahụ bụ ngọngọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị […] Ọ dịghị ihe bụ eziokwu na nke ahụ. Apple na-akwụ ụgwọ ụtụ isi ọ bụla ọ kwụrụ
Nọgide na-akọwa na ha nwere nnukwu azụmahịa nke azụmahịa mba ọzọ, ya mere nnukwu ego nke ego ya dị na mba ọzọ ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ ịghachite ego ahụ ma weta ya na US, ọ ga-efu 40% ime ya.
Nke a bụ akụkụ nke transcript nke nyochaa:
Rose: Kedu ka ọ na-adị gị mgbe ị gara Congress ma ha asị na ị bụ onye na-atụ ụtụ isi?
Cook: Ihe m gwara gị na ihe m ga-aga n’ihu ịgwa ndị na-ege ntị n’abalị a bụ na anyị na-atụ ụtụ isi karịa n’obodo a karịa ndị ọzọ.
Rose: Will ga-ama ego ole ha ga - enweta n’ụlọ ọrụ. Ma ọ pụghị ịgọnahụ na ọ bụkwa ya nwere ego kachasị na mba ọzọ.
Cook: Anyị na-eme, n'ihi na dịka m kwuru na mbụ, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke azụmahịa anyị dị n'èzí.
Rose: Ma gịnị ma ị kpọghachite ya n'ụlọ? Nke ahụ bụ ajụjụ.
Cook: Ọ ga-amasị m iweghachi ya ma kwụọ ụtụ ebe a. Mana ọ ga-efu m 40% iji mee ka nlọghachi ahụ, echeghị m na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Nke a bụ koodu ụtụ emere maka oge mmepụta ihe na ọ bụghị maka afọ dijitalụ. Ọ bụ nzaghachi azụ na ibu dị egwu na America. Ekwesịrị idozi ya ọtụtụ afọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Tim Cook Na-ekwu,'stụ Taxtụ Isi Apple abụghị ihe karịrị "ndọrọ ndọrọ ọchịchị na shit"
John Chen, CEO nke BlackBerry, megide iwu nzuzo nke Apple
Tọghata na Mp3 - Ihe niile, n'efu maka obere oge na Mac App Store